Ahoana no Anampiana An’ireo Namana Nisara-bady?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mahalala olona nisara-panambadiana angamba ianao, ary mety ho maromaro mihitsy. Fahita izany ankehitriny. Hita tamin’ny fikarohana natao tany Polonina fa ny olona 30 taona, izay efa nanambady nandritra ny telo ka hatramin’ny enin-taona, no tena atahorana hisaraka. Tsy ny olona 30 taona ihany anefa no misaraka.
Nanao tatitra ny fikambanana iray any Espaina fa “ny antsasaky ny mpivady [any Eoropa] no hisaraka, rehefa jerena ny antontan’isa.” Toy izany koa ny any amin’ny tany mandroso hafa.
FIHETSEHAM-PO MARO MIFAMAHOFAHO
Inona no mahatonga an’izany toe-javatra mateti-pitranga izany? Hoy ny vehivavy iray, mpanoro hevitra momba ny fanambadiana, any Eoropa Atsinanana: “Mampiharihary fotsiny an’ilay fifandraisana efa tapaka ilay fisaraham-panambadiana. Efa tapaka tanteraka ny fifandraisan’ilay mpivady, raha ny marina, ka nisaraka izy ireo. Miteraka ratram-po be izany.” Nilaza koa izy fa matetika no “tezitra be, manenina mafy, diso fanantenana tanteraka, mamoy fo, ary menatra be ilay olona.” Misy aza te hamono tena. Rehefa mivoaka ny didy hoe eken’ny fitsarana ilay fisarahana, dia mahatsiaro ho tsy misy vidiny sy very tanteraka ary nafoy ilay olona. Mety hieritreritra izy hoe tsy misy dikany intsony ny fiainany.
Nisara-panambadiana i Ewa, taona vitsivitsy lasa izay. Hoy izy: ‘Menatra be aho satria nantsoin’ny mpiara-monina sy ny mpiara-miasa tamiko hoe “vehivavy nisara-bady.” Tezitra be aho. Izaho irery no nitaiza ny zanako roa, ka sady ray aho no reny.’ * Nisara-panambadiana koa i Adam, izay anti-panahy nandritra ny 12 taona. Hoy izy: “Lasa mihevi-tena ho tsy misy dikany intsony aho, ka tezitra be indraindray sady tsy te hifandray amin’iza na iza.”
LASA MIKORONTAN-TSAINA IZY IREO
Mbola mikorontan-tsaina ny olona sasany nisara-panambadiana, na dia taona maro atỳ aoriana aza. Manahy momba ny hoavy mantsy izy ireny. Mety hihevitra koa izy ireny hoe tsy miraharaha azy ny olona. Milaza ny mpanoratra gazety iray fa tsy maintsy “manova ny fahazarany sy mianatra mamaha olana samirery” izy ireny.
Hoy i Stanislas: “Tsy navelan’ny vadiko hitsidika ny zanako roa vavy aho, rehefa nisaraka izahay. Lasa nieritreritra aho hoe tsy misy miraharaha ahy intsony, ary efa nahafoy ahy na dia i Jehovah aza. Tsy te hiaina intsony aho. Tsapako tatỳ aoriana fa tena diso hevitra aho.” Natahotra ny hoavy i Wanda, rehefa nisara-panambadiana. Hoy izy: “Nino aho hoe tsy hiraharaha ahy sy ny zanako intsony ny olona, any aoriana any, ary na dia ny mpiara-manompo aza. Hitako anefa fa tena nanohana anay ireo ranadahy sy rahavavy. Nanampy ahy hitaiza ny zanako ho lasa mpanompon’i Jehovah koa izy ireo.”
Hita amin’izany fa zavatra mahakivy foana no eritreretin’ny olona sasany nisara-panambadiana. Lasa manambany tena izy ireo ka mihevi-tena ho tsy misy dikany, ary mieritreritra hoe tsy mendrika ny hotiavina. Mety hanjary ho tia manakiana koa izy ireo, ka hieritreritra fa tsy miraharaha azy ny fiangonana sady tsy mangoraka. Toa an’i Stanislas sy Wanda anefa, dia mety hahatsapa ihany ny olona nisara-panambadiana, amin’ny farany, fa tena miahy azy ny rahalahy sy anabavy. Tena miahy azy ireo ny mpiara-manompo, na dia tsy voamarik’izy ireo aza izany amin’ny voalohany.
MAHATSIARO HO MANIRERY SY AILIKILIKA
Tadidio fa mbola mety hahatsiaro ho manirery ireo nisara-panambadiana, na dia tena miezaka manohana azy aza isika. Ny anabavy nisara-panambadiana no tena mety hieritreritra hoe tsy dia misy miraharaha. Hoy i Alicia: “Valo taona izay aho no nisara-panambadiana. Mbola mahatsiaro ho tsy misy vidiny anefa aho indraindray. Te hitokantokana aho amin’ireny fotoana ireny ary mitomany sy mitsetra tena.”
Matetika ny olona nisara-panambadiana no mahatsapa an’ireo fihetseham-po ireo. Milaza anefa ny Baiboly fa tsy tsara ny mitokantokana. Mety hanohitra an’izay “hevitra feno fahendrena” rehetra mantsy ny olona mitokantokana. (Ohab. 18:1) Tokony ho takatry ny olona mahatsiaro ho manirery fa tsy fahendrena ny mitady torohevitra sy fampiononana matetika amin’ny lehilahy, raha vehivavy izy, ary amin’ny vehivavy raha lehilahy izy. Mety hanjary hifankatia mantsy izy sy ilay olona, nefa tsy mety izany.
Mety hifamahofaho be ny fihetseham-pon’ireo mpiara-manompo nisara-panambadiana. Mety hatahotra ny hoavy, ohatra, izy ireo, na hahatsiaro ho manirery na ailikilika. Tadidio fa mpahazo ny olona nisara-bady izany sady tsy mora ny miatrika azy. Tokony hanahaka an’i Jehovah àry isika ka hanohana foana an’ireny rahalahy sy anabavy ireny. (Sal. 55:22; 1 Pet. 5:6, 7) Matokia fa tena hankasitrahan’izy ireny izay fanampiana omentsika. Ho tsapan’izy ireny fa tena namana ny olona eo anivon’ny fiangonana.—Ohab. 17:17; 18:24.
Fomba Fijery Voalanjalanja
Tena zava-dehibe amintsika mpanompon’i Jehovah ny fanambadiana. Mino izay voalazan’ny Soratra Masina mantsy isika. Milaza mazava tsara Andriamanitra ao amin’ny Malakia 2:16 hoe: “Halako ny fisaraham-panambadiana.” Ny fijangajangana ihany no lazain’ny Soratra Masina fa antony ahafahana misara-panambadiana. Fahadisoana lehibe àry ny mieritreritra ny hisaraka amin’ny vady noho ny antony tsy araka ny Soratra Masina, angamba mba hahafahana hanambady olon-kafa.—Gen. 2:22-24; Deot. 5:21; Mat. 19:4-6, 9.
Ahoana anefa raha misy Kristianina nisara-panambadiana, angamba satria nanitsakitsaka azy ny vadiny? Manohana azy ireny ny rahalahy sy anabavy eo anivon’ny fiangonana. Manahaka an’i Jehovah izy ireo ka manao izay rehetra azony atao mba hanampiana ny olo-marina, izay “ketraka” noho ny manjo azy.—Sal. 34:15, 18; Isaia 41:10.
Afaka manome ny fanampiana tena ilain’ny olona nisara-panambadiana ve ianao? Inona no azonao atao mba hanampiana ny olona manana fihetseham-po toa an’ireo voaresaka ato? Diniho ny voalazan’ny Baiboly, ary mariho izay nataon’ny Kristianina sasany.
Mihainoa tsara. (Jak. 1:19)
Ara-dalàna raha tsy te hitantara ny tsipiriany momba izay nahatonga an’ilay fisaraham-panambadiana ilay olona. Mety ho vao mainka ratsy ny vokany raha milaza ny zava-drehetra nahatezitra azy izy. Mety tsy tena hanamaivana ny fahoriany izany. (Ohab. 12:25; Rom. 12:15) Nanampy an’i Adam, ilay voaresaka tany aloha, i Mickael. Miaiky izy fa tsy voatery hahalala ny tsipiriany rehetra ianao vao hahay hihaino sy hangoraka. Hoy izy: “Niezaka nanampy an’i Adam aho mba hahatsapany hoe mety ho voatantarany amiko ny zavatra sasany rehefa kivy be izy, nefa anenenany izany avy eo.” Nilaza tamin’i Adam àry i Mickael hoe aleony tsy mahalala ny tsipiriany rehetra. Nihaino tsara anefa izy ary hita hoe tena namana. Mety hampahery be an’ilay olona nisara-bady isika, aloha na aorian’ny fivoriana, raha milaza fotsiny hoe: “Manao ahoana ianao izao? Tena mafy ny mahazo anao, fa vonona hanampy anao aho.”
Ampio izy. (Fil. 2:4)
Hoy i Mamy: “Nanokana fotoana hanampiana anabavy iray nisara-bady izahay mivady. Nanamboatra ny hidim-baravarany, ohatra, izahay ary nitondra azy tany amin’ny dokotera.” Toy ny hoe zavatra tsotsotra ireo nefa tena nilain’ilay anabavy. Nihanilamin-tsaina izy rehefa nandeha ny fotoana. Nirotsaka ho mpisava lalana mihitsy izy, tatỳ aoriana, ary natao batisa ny zanany vavy 11 taona.
Omeo toky ilay olona hoe tsapan’i Jehovah ny manjo azy.
Raha mihevi-tena ho tsy misy vidiny ilay olona, dia omeo toky izy fa tian’Andriamanitra ny mpanompony tsirairay. “Sarobidy noho ny fody maro” isika. (Mat. 10:29-31) Tsy manan-tsahala isika tsirairay eo anatrehany. “Mpandinika ny fo” i Jehovah ka mahatsapa ny manjo an’ireo nisara-bady. Tsy hahafoy ny mpanompony tsy mivadika mihitsy izy. (Ohab. 17:3; Sal. 145:18; Heb. 13:5) Omeo toky àry ilay olona hoe mahafaly an’i Jehovah ny fitiavany ny fahamarinana sy ny ezaka ataony mba hanompoana azy.—Fil. 2:29.
Ampirisiho hiaraka amin’ny fiangonana foana izy.
Tsy mahavita mivory ny olona sasany rehefa mikorontan-tsaina. ‘Natao mba hampaherezana’ anefa ny fivoriana sady manatanjaka antsika. (1 Kor. 14:26; Sal. 122:1) Mila miezaka manampy àry ny anti-panahy. Hoy i Wanda, ilay voaresaka tany aloha: ‘Mbola tsaroanay hatramin’izao fa tena tia sy niahy anay ny anti-panahy.’
Ampirisiho hivavaka sy hianatra samirery ary hisaintsaina izy, mba hanatsarany ny fifandraisany amin’Andriamanitra. (Jak. 4:8)
Marina fa any an-danitra i Jehovah ary izy no Mahery Indrindra, nefa miahy ‘ny ory sy ny torotoro fo ary ireo mangovitra noho ny teniny’ izy. Omeo toky ilay olona nisara-bady hoe marina izany. Antitrantero aminy koa fa tena ilaina ny mivavaka sy mianatra samirery, satria manampy antsika ho akaiky kokoa an’i Jehovah izany.—Isaia 66:2.
Asao izy hiara-manompo aminao na hiara-manomana fivoriana aminao.
Hanampy azy izany mba hanana herim-po kokoa hiatrehana ny fiainany. Nanampy anabavy iray be zotom-po i Marta, rehefa nisara-panambadiana izy io ka kivy be. Hoy i Marta: “Niara-nanompo matetika izahay. Nanana tanjona izahay, ary faly rehefa nahatratra an’izany. Miara-manomana fivoriana izahay indraindray, ary avy eo manao sakafo matsiro.”
Hizara Hizara Ampio Ireo Mpiray Finoana Nisara-bady